Gauze ထုတ်ကုန်စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Gauze Products ထုတ်လုပ်သူများ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ကျဲစ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဒဏ်ရာကို ၀တ်ဆင်ရန်နှင့် ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်း ဒဏ်ရာ၏သွေးစွန်းထင်းမှုကို သန့်စင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ကျဲစ နှစ်မျိုးရှိပြီး တစ်မျိုးမှာ ပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ ပိုးသတ်ထားသော ပိတ်စများဖြစ်သည်။
ပိုးမွှားနည်းဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ကျဲစများကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ပိုးမွှားကင်းစင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ပိတ်စကို အပူချိန်မြင့်မြင့်နှင့် ဖိအားမြင့်ငွေ့ သို့မဟုတ် EO ဖြင့် ပိုးသတ်ပြီးနောက်မှသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ကျဲစ swab ၏အဓိကပစ္စည်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစုပ်ယူထားသောပိတ်ကျဲစဖြစ်သည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ကျဲစကို ခေါက်အစွန်း၊ ခေါက်မထားသောအစွန်း၊ ဓာတ်မှန်ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ ခွဲခြားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် CE၊ FDA၊ iso13485 နှင့် အခြားထောက်ခံချက်ရရှိထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ပါးလွှာကို နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံပေါင်း 100 ကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ပါးရေမြှုပ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ပါးဆပ်ပြာ၊ ပိတ်ပါးပတ်တီးများနှင့် အခြားပိတ်ကျဲစပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အဖြူရောင် တစ်ခါသုံး gamgee ၀တ်စုံများ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- 1.Material: 100% Cotton (Sterile and Non sterile) 2.size:7*10cm,10*10cm,10*20cm,20*25cm,35*40cm သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော 3.Color: White colour421′s, 32′s, 40′s 5.Mesh of 29, 25, 20, 17, 14, 10 threads 6:ချည်သားအလေးချိန်: 200gsm/300gsm/350gsm/400gsm သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် 7.Sterilization- Gamma/EO gas/Steam 8.Type:non selvage/selvage/selvage/double selvage Sizes နှင့် package Model Packing Carton Size 10*10cm မြုံ 1pc/pack,10p...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမြင့်မားသောစုပ်ယူမှု EO ရေနွေးငွေ့မြုံ 100% Tampon Gauze
5x5cm 10x10cm 100% ဂွမ်းမြုံ Paraffin Gauze
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Paraffin vaseline gauze dressing gauze paraffin သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ degreased ပိတ်ကျဲစ သို့မဟုတ် paraffin နှင့် တွဲဖက်၍ ယက်မလုပ်သောမှ ပြုလုပ်ထားသည်။အရေပြားကို ချောမွတ်စေပြီး အရေပြားကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဆေးခန်းတွေမှာ အသုံးများတယ်။ဖော်ပြချက်- 1. Vaseline gauze ၏အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာ၊ အရေပြားကို စုပ်ယူခြင်း၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာများနှင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာများ၊ အရေပြားထုတ်ယူခြင်း၊ အရေပြားဖောက်ပြန်ဒဏ်ရာများ၊ ခြေထောက်အနာများ။2. ဒဏ်ရာမှ ချည်မျှင် ပြုတ်ကျခြင်း မရှိပါ။gauze mesh က ပျစ်ပြီး အနာကို အဆင်ပြေစေပါတယ်...
3" x5ကိုက်ပိတ်ကျဲစ ပတ်တီးလိပ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော မြင့်မားသောစုပ်ယူမှုရှိသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပိုးမွှားချုံ့
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ Gauze ပတ်တီးသည် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထည်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပြီး အနာကျက်စေရန်အတွက် သက်သာစေရန် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထားသော အထည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နေရာတွင် လုံခြုံအောင်ထားရန် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ .ဤပတ်တီးများသည် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားများစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။1.100% ချည်သား၊ စုပ်ယူမှု မြင့်မားပြီး နူးညံ့မှု 2. 21′s,32′s,40′s ၏ 3.mesh of 30×20,24×20,19×15… 4.အရှည် 10m,10yd.. .
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအမြုံမဟုတ်သောချုံ့ချည်မျှင် elastic ပိတ်ကျဲစပတ်တီးနှင့်ကိုက်ညီ
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ Gauze ပတ်တီးသည် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထည်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပြီး အနာကျက်စေရန်အတွက် သက်သာစေရန် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထားသော အထည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နေရာတွင် လုံခြုံအောင်ထားရန် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤပတ်တီးများသည် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားများစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံးပစ္စည်းများကို ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ကတ်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် အညစ်အကြေးလုံးဝကင်းစင်ပါသည်။ပျော့ပျောင်းသော၊ ပျော့ပျောင်းသော၊ အနားသပ်မရှိသော၊ ယားယံခြင်းမရှိသော CE၊ ISO၊ FDA နှင့် အခြား s...
အသစ်စက်စက် CE လက်မှတ် မဆေးကြောရသေးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝမ်းဗိုက်သားမွေးကင်းစင်သော Lap Pad ရေမြှုပ်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ဖော်ပြချက် 1.Color- အဖြူရောင်/Green နှင့် အခြားအရောင်ကို သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။2. ချည်သား 21′s, 32′s, 40′s။3.Mesh of 29, 25, 20, 17, 14, 10 threads။4. ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း/ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတိပ်ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ၊5.အဖြူရောင်ချည်ကွင်း၏အပြာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ။6.per-washed သို့မဟုတ် non- washed။သတ်မှတ်ချက်များ 1. စုပ်ယူနိုင်မှုနှင့် နူးညံ့မှုမြင့်မားသော ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။2. သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် မတူညီသောအရွယ်အစားနှင့် အမျိုးအစားများ။3. 21s၊ 32s၊ 40s ချည်ချည်၊22၊ 20၊ 18၊ 17၊ 13၊ 12 ကွက်များ...
CE Standard Absorbent Medical 100% Cotton Gauze Roll
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် သတ်မှတ်ချက်များ ၁)။100% ချည်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စုပ်ယူမှု မြင့်မားပြီး နူးညံ့မှုရှိသည်။၂)။32s၊ 40s ချည်ချည်၊Mesh of 22, 20, 18, 17, 13, 12 threads etc. 3)။အလွန်စုပ်ယူနိုင်ပြီး ပျော့ပျောင်းသော၊ မတူညီသော အရွယ်အစားနှင့် အမျိုးအစားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။၄)။ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- ချည်တစ်လိပ်လျှင် 10 သို့မဟုတ် 20 လိပ်။၅)။ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်- 30% down payment လက်ခံရရှိပြီး ရက် 40 အတွင်း။ထူးခြားချက်များ ၁)။ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချည်ပိတ်ပါးလွှာ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို လုံခြုံစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။၂)။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်...
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ Gauze ပတ်တီးသည် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထည်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပြီး အနာကျက်စေရန်အတွက် သက်သာစေရန် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထားသော အထည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နေရာတွင် လုံခြုံအောင်ထားရန် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ .ဤပတ်တီးများသည် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားများစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1. ပစ္စည်း- ပတ်တီးပိတ်ချော 2. ပစ္စည်း- Polyester သို့မဟုတ် ဖန်ဖိုက်ဘာ 3. အရွယ်အစား- 2"x4YDS;3"x4YDS;4"x$YDS;5"x4YDS;6"x4YDS 4. W...
တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဝင် ဝမ်းဗိုက်ပိတ်ကျဲစ swab 10cmx10cm
ပိတ်စများကို စက်ဖြင့် ခေါက်ထားသည်။ချည်သားစစ်စစ် 100% ချည်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို နူးညံ့ပြီး တွယ်ကပ်စေပါသည်။သာလွန်ကောင်းမွန်သော စုပ်ယူနိုင်မှုကြောင့် pads များသည် သွေးတွင်းရှိ exudates များကို စုပ်ယူရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ခေါက်၊ ခေါက်၊ ခေါက်ကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသော pads များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး x-ray နှင့် non x-ray ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကပ်တွယ်ထားသော pads များသည် လည်ပတ်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် 1. 100% အော်ဂဲနစ်ချည်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း 2. စုပ်ယူမှုမြင့်မားပြီး နူးညံ့သောအထိအတွေ့ 3. အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း 5. အစွန်းခေါက် o...
ခွဲစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စုပ်ယူနိုင်သော ပိုးမွှားမရှိသော 100% ချည်သားပိတ်ပါးလွှာ အပြာရောင် 4×4 12လွှာ